Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Athletic Bilbao… +SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Arsenal oo iibinaysa mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan… (Waa kee?)
“Liverpool way ka awood badan tahay Real Madrid” – Steve McManaman
Arsenal oo ku socota wadaddii ay kula saxiixan lahayd xiddig ka tirsan Barcelona
Chelsea, Leicester City, Everton & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaarayo horyaalka Premier League
Liverpool iyo Man United oo si xooggan ugu dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Ajax
Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Athletic Bilbao… +SAWIRRO
Dajiye January 31, 2021
(Barelona) 01 Feb 2021. Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Athletic Bilbao, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Qeybyta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysa kooxda Barcelona.
Daqiiqadii 20-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Lionel Messi oo dhaliyay laadka xurta ah oo aad u qurxoon.
49 daqiiqo marka ay dheesho mareysay kooxda Athletic Bilbao ayaa heshay goolka barbardhaca, kaddib markii uu goolkan iska dhaliyay xiddiga Barcelona ee Jordi Alba dheeshay ayaana sidaas ku noqotay 1-1.
Daqiiqadii 74-aad Antoine Griezmann oo caawin qurux badan ka helay saaxiibkiis Oscar Mingueza ayaa hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Barcelona wuxuuna dheesha ka dhigay 2-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Barcelona kaga adkaatay kooxda Athletic Bilbao oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, Barca ayaana haata booska labaad ka soo gashay kala sareynta horyaalka La Liga.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Barcelona iyo Athletic Bilbao ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Antoine Griezmann oo ammaanay Lionel Messi, sharraxaadna ka bixiyey sirta ka dambeysa dabaal-deggii uu sameeyey markii uu xalay goolka dhaliyey